Olee otú mbo mbuli kọmputa gị ọsọ na arụmọrụ
> Resource> Utility> Olee mbo mbuli gị Computer ọsọ na arụmọrụ
PC amalite nwayọọ nwayọọ?
Na-echere ihe omume na-agba ọsọ?
Ezute random njehie, malitegharia na mkpọka?
Oria malware, spyware na ojiji ọgụ?
Ghara ịdị irè nchọgharị homepage setịpụrụ oge niile?
Ngwa ngwa Internet na download gbapụrụ ọsọ?
Na-egbu mgbu buffering na random video stalls?
Ọ na-ada maara? Ọ bụrụ na gị PC dabara nkọwa n'elu, ị nwere ike nza nke mbipụta na mkpa ka a ofu iji mbo mbuli gị PC ọsọ na arụmọrụ dị nnọọ ka a ọhụrụ nwa.
Computer na-ewuli elu na junk faịlụ na ejibeghi faịlụ karịrị oge. Na-enweghị mgbe ego elu na mmezi, ha ga-eweta ụfọdụ njehie. Na njehie-amalite imubanye na PC gị na nke nwere ike ime gị na kọmputa na-agba ọsọ ngwa ngwa, omume na-agba ọsọ adịghị dị ka ha na-eji, na ọbụna nwere usoro ọdịda. Mgbe ahụ otú e si amata okwu na mbo mbuli PC arụmọrụ na ọsọ? Ọ bụrụ na ị maghị otú ị nwere ike ịmata ihe iseokwu na-emekpa gị usoro, ị na-atụ aro iji wụnye PC booster software nke pụrụ inyere gị na-arụ ọrụ, nke mere na ị na-adịghị mkpa na-eme ihe ọ bụla ikpe ma ọ bụ nhọrọ. Ebe a Wondershare 1-Click PC Care dị otú ahụ ụdị PC booster.
Mgbe wụnye na launching Wondershare 1-Click PC Care na kọmputa gị, usoro ihe omume willcheck gị PC nzọụkwụ site nzọụkwụ na-akpaghị aka, gụnyere PC arụmọrụ, nche na nkwụsi ike na. Ị ga-enweta a mkpirikpi akụkọ na oké ndụmọdụ mgbe kọmputa atule. Ịnwere ike ịchọgharị na ịlele N'ihi ka i wee mara nsogbu nke gị na kọmputa. Mgbe ahụ ị pụrụ pịa "Idozi Ugbu a" bọtịnụ idozi njehie na kọmputa gị mgbe ịlele.
Ọrụ bụ isi 1-Click PC Care eme mbo mbuli kọmputa gị:
PC arụmọrụ: Gbaa mbọ hụ na ị nwere kwesịrị ekwesị ngwaike na-akwado Windows, na ego gị Windows buut oge, Windows paging faịlụ size, usoro ọrụ ọnọdụ, ndekọ redundancy na junk faịlụ gị PC, na kọmputa gị na netwọk ntọala.
PC Kwụsie: Gbaa mbọ hụ na kọmputa gị ngwaike bụ ezuru Windows, na ego usoro ọrụ ọnọdụ, buut oge gị Windows, ahịhịa faịlụ na kọmputa gị, ndekọ faịlụ redundancy, Windows paging file size na netwọk ntọala nke gị na kọmputa.
PC Nche: Lelee dịịrị nanị onwe onye, ​​Windows nche na netwọk nche na PC gị na, iji hụ na ị nwere anụ na mma-Windows gburugburu ebe obibi.
Ọsọ ọsọ na mfe ịmata niile PC nsogbu gị usoro si ọsọ na arụmọrụ, na kpochapụ ha niile. Ị adịghị mkpa ịbụ onye na-ọkachamara, ma i nwere ike na-eme ka a ezigbo ọkachamara na-enweghị enyemaka site n'aka ndị enyi na ndị na-enweghị ego na-eri na PC technicians, naanị na 1-Click PC Care. Easy mbo mbuli gị PC na otu click!
Olee otú ọsọ Up Internet Explorer
Ihe bụ na otú ndozi Rundll Error na mmalite
Olee otú Idozi ngwa Internet Explorer 8/9
Vista Nọgidere Na-eme ịgbanyụ on Mmalite - Olee otú idozi ya
Olee otú Idozi MBR efu Issues
Gịnị bụ Ntldr & otú ndozi Ntldr Error
Otú ịgbanwe File System enweghị Formatting